အပူပိုင်းမုန်တိုင်း PARMA ဗီယက်နမ်ကမ်းခြေကိုစတင်ဖြတ်ကျော် | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း PARMA ဗီယက်နမ်ကမ်းခြေကိုစတင်ဖြတ်ကျော်
October 14, 2009 — mmweather
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း PARMA ၏ ရှေ့ပိုင်းသည် ဗီယက်နမ်ကမ်းခြေကို မြန်မာစံတော်ချိန် ယနေ့ညနေ ၆ နာရီခွဲ မတိုင်မီVan-Uc မြစ်ဝတောင်ဘက် ၈ မိုင်ခန့်မှ ဝင်ရောက်လျှက်ရှိပါသည်။ မုန်တိုင်း၏ ဗဟိုမှာ ကမ်းခြေနှင့် ၁၃ မိုင်ခန့်သာ ကွာဝေးပြီး တစ်နာရီလျှင် ၃ မိုင်နှုန်းဖြင့် အနောက်ဘက်သို့ ရွေ့လျားနေပါသည်။ မုန်တိုင်းသည် ကမ်းခြေသို့ မဝင်ရောက်မီ အားအနည်းငယ်လျော့နည်းလာပြီး ကုန်းတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ပြီးသည်နှင့် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဖြစ်အားပျော့ပျက်ပျယ်သွားမည်ဟုခန့်မှန်းထားပါသည်။
၂ဝဝ၉ ခုနှစ် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အနောက်ပိုင်းမှ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် လုံးဝပျက်ပျယ်သွားမည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြသည့် PARMA သည် ယခုနှစ်အတွက် ၁၈ ရက်တိုင်တိုင်ကြာမြင့်သည့် သက်တမ်းအကြာရှည်ဆုံး မုန်တိုင်းစာရင်းဝင်သွားပြီဖြစ်ပါသည်။ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဆင့်မှ အဆင့်-၄ CAT-4 စူပါတိုင်ဖွန်းအဆင့်သို့တိုင်ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအား ၃ ကြိမ်၊ ဟိုင်နန်ကျွန်းနှင့် ယခု ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းတို့ကို ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ပြီး မုန်တိုင်းနှင့်ဆက်စပ်ဖြစ်ပေါ်လာသည့် – လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုအပြင် ရေကြီးခြင်း၊ မြေပြိုခြင်းစသည့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကို ဖြစ်စေခဲ့ပါသည်။
One Response to “အပူပိုင်းမုန်တိုင်း PARMA ဗီယက်နမ်ကမ်းခြေကိုစတင်ဖြတ်ကျော်”
On October 13, Prime Minister Nguyen Tan Dung sent an urgent message directing preventive measures to be put in place to limit the damage caused by Storm Parma to every province between Quang Ninh and Nghe An.
He said the ministries of Industry and Commerce, Transport, Information and Communications, Culture, Sports and Tourism, Defence and Public Security are responsible for helping local people evacuate from landslide-prone areas.
Deputy Prime Minister Hoang Trung Hai warned that the storm’s danger should not be underestimated even though the rain from Parma has not been heavy so far.
Cao Duc Phat, Minister of Agriculture and Rural Development, stressed that Storm Parma was unpredictable, so all localities must adhere to guidelines to brace themselves for the storm.
Ninh Binh, Nam Dinh and Quang Ninh provinces and Haiphong City have already moved people to safe grounds far from the dyke system.
The National Centre for Hydrometeorology forecast that Storm Parma was 170km off the coastline from Quang Ninh to Ha Tinh on Tuesday afternoon, with gusts of wind up to 183km/h.
The storm is expected to downgrade intoatropical low pressure and sit over northern Laos on Thursday afternoon. Wind speeds could fall to less than 39km/h.
The National Committee for Flood and Storm Prevention and Control has asked the local authorities in the provinces from Quang Ninh to Nghe An not to let any boats put to sea and keep all ships at sea fully informed about the storm’s development.
The High Command of the Border Guard has assigned nearly 3,000 soldiers to assist people in coping with the storm.
In the central province of Ha Tinh, two boats carrying 13 fishermen on October 13 sank on its way to shelter, causing losses of VND400 million (US$220,000), but there were no fatalities.
« အပူပိုင်းမုန်တိုင်း PARMA update 14OCT-01
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း PARMA ကုန်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားပြီ »